Xiaomi Mi Mix Fold vs Galaxy Z Songa 2 | I-Androidsis
UIgnacio Sala | | Samsung, Xiaomi
I-Xiaomi Mi Mix Fold vs Samsung Galaxy Fold 2
Nje ukuba uXiaomi anike isindululo sayo sokusonga iifowuni, sinyanzelekile ukuba senze Thelekisa phakathi kweXiaomi Mi Mix Fold kunye neGalaxy Z Fold 2Imodeli yakutshanje yokusonga i-smartphone yenkampani yaseKorea nalapho imodeli yeXiaomi isela khona.
Isamsung (Galaxy Foldkunye neHuawei (Umtshato X) iboniswe phantse ngaxeshanye ekuqaleni kwe-2019, usuku olunye ngaphandle, ii-smartphones zokuqala ukubetha emarikeni, nangona kwimeko yemodeli yeHuawei, ekugqibeleni ayishiyanga iChina. Nangona uyilo olusetyenziswe yiSamsung (incwadi-in-type) yagxekwa kwaye eyakwaHuawei yadunyiswa, ekugqibeleni i-Samsung yayilungile kwaye ikhokele indlela. Isizukulwana sesibini seGolden Fold, I-Galaxy Z Fold 2 yaqaliswa ngo-Agasti 2020.
Kwaye xa ndisithi wayenyanisile, kungenxa yokuba eyona nto ibalulekileyo kwifowuni yokusonga kukuba isonga ngaphakathi, njengencwadi, oko kukuthi, ukuba lIsikrini esisongekileyo sangaphakathi sikhuselwe ngawo onke amaxesha, Ayifani ne-Mate X enesikrini esijikeleze ingaphandle yesixhobo kwaye xa isongiweyo, obunye ubuso baba siscreen esingaphandle.
Isamsung, xa usebenzisa uyilo olufana nencwadi, iphumeze isikrini ngaphandle, umboniso ozimeleyo ngokupheleleyo, ubungakanani bawo bonyuswe kakhulu kwisizukulwana sesibini esasungulwa kunyaka ophelileyo.
Kwaye xa ndisithi i-Samsung ichanekile, ndiyayitsho, kuba kwiminyaka embalwa eyadlulayo, inkampani yeXiaomi uthumele ividiyo apho ungabona i- I-smartphone enesikrini sokusonga Ngoyilo olufana neHuawei's Mate X, nangona kunjalo, xa le smartphone yatyhilwa ngokusesikweni, yayisebenzisa incwadi efanayo yoyilo njengeGreen Z Fold.
1 I-Galaxy Z Fold 2 vs Xiaomi Mi Hlanganisa iFold
1.4 Ubukhulu kunye nobunzima
1.7 Ukusetyenziswa kweenkonzo ezininzi
1.9 Ixabiso kunye nokufumaneka
I-Galaxy Z Fold 2 vs Xiaomi Mi Hlanganisa iFold
Xiaomi Mi Mix Hlanganisa
Njengoko benditshilo ngasentla, iXiaomi's Mi Mix Fold isebenzisa uyilo olufanayo njengeGolden Fold yeSamsung (Bade bakopa umfanekiso wentengisoUyilo oluvala ngaphakathi ukukhusela iscreen sokugoba kwaye sibandakanya isikrini kwicala elinye esinokuthi sinxibelelane ngaso kunye ne-smartphone ngawo onke amaxesha ngaphandle kokuyivula ngokuqhubekayo.
Kuzo zombini iimeko, ikhusi elingaphandle limxinwa kakhulu uthanda ukwazi ukonwabela iimuvi okanye umxholo wemultimedia. Ngale ndlela, isikrini sikaXiaomi sincinci, ke ukuba ubulindele utshintsho kule meko, awuyi kuyifumana kwiXiaomi.
Enye eyahlukileyo, siyifumana kwiscreen sangaphakathi. Ngelixa izinga lokuhlaziya lefayile ye- Isikrini sangaphakathi seXiaomi, uhlobo lwe-AMOLED ngama-60 Hz, ifikelela kuma-90 Hz kwiscreen esingaphandle.
KwiGolden Fold 2 yinto eyahlukileyo, ukusukela kwiscreen esingaphandle ifikelela kwi-120 Hz, luhlobo lwe-AMOLED kwaye isikrini sangaphandle sisetelwe kwi-60 Hz njengenqanaba lokuhlaziya.
I-Samsung Galaxy Fold 2
Iscreen sangaphakathi seMi Mix Fold sinjalo I-8,01 intshi nge-7,5 intshi yemodeli yeSamsung. Iscreen sangaphandle, kwimeko yemodeli yeXiaomi, zii-intshi ze-6,52 ngo-6,2 intshi yeFold 2.
I-Galaxy Fold 2 yaziswa ngo-Agasti 2020 ngelixa iMi Mix Fold ibonisiwe ngo-Matshi 2021 (kwiinyanga ezisixhenxe kamva). Lo mahluko wexesha uvumele inkampani yaseKorea Sebenzisa eyona processor inamandla yeQualcomm namhlanje, i-Snapdragon 888 ihamba neenketho ezahlukeneyo zememori ye-RAM njengendawo yokugcina.
I-Galaxy Z Fold 2, ilawulwa yi I-Qualcomm's Snapdragon 865+ ine-256GB yokugcina kunye ne-12GB ye-RAM. Isamsung inikezela kuphela ngemodeli enye yesi sixhobo, ngelixa iXiaomi e-China ibonelela ukuya kwi-3 iinguqulelo ezahlukeneyo ze-RAM kunye nokugcinwa.
Zombini iimodeli iyahambelana nothungelwano lwe5G, Babandakanya iWi-Fi 6, iBluetooth 5.2 kunye neNFC. Ukhuseleko lubonelelwa isivamvo somnwe esibekwe kwelinye lamacala yesixhobo.
Ukuba ubukhulu bezi fowuni zisongwayo sele bukhulu, Imodeli yeXiaomi ayiyiphuculanga, njengoko ingabanzi kuphela, kodwa ikwanobunzima obude.
I-Galaxy Z Fold 2 X x 159.2 68 16.8 mm X x 159.2 128.2 6.9 mm I-282 gram
Xiaomi Mi Mix Hlanganisa X x 173.27 69.8 17.2 mm X x 173.27 133.38 7.62 mm I-317 gram
El I-Max My Fold ibandakanya ibhetri eyi-5.020 mAh kwaye ixhasa ukutshaja ngokukhawuleza ukuya kuthi ga kwi-67W. Si-amsung ikhethe ibhetri ye-4.500 mAh iyahambelana nokukhawulezisa ngokukhawuleza ukuya kuthi ga kwi-45W.
UXiaomi ubheja ngamandla ngekhamera yeMi Mix Fold ene I-lens eyi-108 ye-lens ephambili, iilensi zemfono mfono eziyi-8 ezine-3x optical zoom Iyakwazi ukurekhoda iividiyo kumgangatho we-13K.
Zonke iilensi ezinikezelwa yiSamsung Z Fold 2 zii-12 MP (Iilensi eziphambili, i-engile ebanzi kunye ne-engile ebanzi) kwaye ungavumeli ukurekhoda iividiyo nge8K. Kucacile ukuba lonke uphuculo olwenziwe li I-Galaxy S21 Ultra Ziya kumiliselwa kwi-Galaxy Z Fold 3 eziboniswa yinkampani yaseKorea embindini walo nyaka.
Xa sivula iMi Mix Fold, siyothuka ukungafumani khamera yeselfie, Ke umphambili wonke siscreen, ngaphandle kwesampulu. Ukuba sifuna ukuthatha iiselfie, kufuneka siyenze ngefowuni esongelayo kunye nenzwa yayo ye-20 MP.
Isamsung isinika ikhamera yangaphambili ngaphakathi, ukuze sikwazi Sebenzisa i-smartphone evulekileyo kwinkomfa yevidiyo, ikhamera esiyifumana kwikona ephezulu ngasekhohlo kwesikrini kwaye yintoni enceda Ukusebenza kwehenjisi esivumela ukuba sibeke isiqingatha seFold esivulekileyo ukuze sibeke endaweni ethe tyaba.
Ukusetyenziswa kweenkonzo ezininzi
Zombini abavelisi zibonelela ngezisombululo ezifanelekileyo kwimisebenzi emininzi kwiifowuni eziphathwayo, nangona kunjalo Xiaomi i-smartphone ilawulwa yi-Android 10 ngelixa i-Galaxy Z Fold 2 ihlaziywa kutshanje kwi-Android 11.
Isisombululo esinomdla esinikwa nguXiaomi yinto enokwenzeka tshintsha i-interface ye-smartphone kwi-desktop eyodwa, nangona kwiscreen esincinci, ndiyathandabuza ukuba ungafumana okuninzi kuyo.
Ngale ndlela, i-Samsung isinika i-DeX, isisombululo sokuba pIvumela ukuqhagamshela kwiscreen esikhudlwana ngaphandle kweengcingo kwi-PC ngeWindows okanye nge-Samsung TV kwaye usebenze ngokuthe ngqo kwi-smartphone
Isamsung inikezela kuphela izithethi ezibini, kwelinye icala le-smartphone, nangona kunjalo, Xiaomi ikhulu kwaye yaphumeza i-4, amabini kwicala ngalinye, ke xa kuziwa kukonwabela imovie, siya kufumana umgangatho ophezulu wesandi kwimodeli yeXiaomi.
haman / kardon yinkampani esemva kokusetwa kwesandi, inkampani ethi eyeSamsung 5 kwiminyaka eyadlulayo.
Imodeli yezoqoqosho kakhulu kuluhlu I-Xiaomi Mi Fold, i-12 GB ye-RAM kunye ne-256 GB yokugcina, Ixabisa i-RMB 9.999, malunga 1.3000 euro Utshintsho. Kuza kufuneka songeze irhafu ukuba ekugqibeleni ithengiswa ngaphandle kwe-China, ke ixabiso lingasetwa kwi-1.500 okanye i-1.600 euros yemodeli ene-12 GB ye-RAM kunye ne-256 GB yokugcina.
Inguqulelo ene I-12 GB ye-RAM kunye ne-512 GB yokugcina Ixabisa i-10.999 RMB, I-1430 euro ukuyitshintsha, Ngelixa uguqulelo kunye I-16 GB ye-RAM kunye ne-512 GB yokugcina imi kwi-12.999 RMB, I-1.690 euro ukuyitshintsha.
Kude kube namhla, sisenokufumana I-Galaxy Z Fold 2 ye-1.200 euro kwiAmazon, ngaphantsi kwama-euro angama-2.000 XNUMX exabiso lokuqalisa, ngaphezulu kwexabiso elinomdla kuyo yonke into elisinika yona.
Okwangoku ukusuka kwiXiaomi khange babhengeze umhla wokumiliselwa kweMi Mix Fold ngaphandle kwe-china, ke kusenokwenzeka ukuba esi sizukulwana sokuqala asiyi kuyishiya iAsia.
UXiaomi usebenze ngokuthe ngqo iUkuqhafaza kwi-Galaxy Z Fold 2 kunye nokuphucula ezinye zeempawu, ngenxa yemicimbi yendawo, engakhange yenziwe.
Kungenzeka ukuba, isizukulwana sesithathu sefowuni esongekayo evela kwi-Samsung sSombulula ezahlukeneyo kwikhamera nakwisandi, amanqaku amabini apho imodeli yeXiaomi iphumelela ngokubanzi.
Kwi-Androidsis, sithethe izihlandlo ezininzi malunga namarhe okuba iSamsung ifunda ngendlela demokrasi ukusonga ii-smartphones, kwaye kusenokwenzeka ukuba kuwo wonke lo nyaka, khupha inguqulelo ye-lite, ngexabiso eliphantsi kakhulu kune-2.000 euros exabiso lisandula ukufika leGold Fold 2 kwixabiso lentengiso.
Okwangoku, sinokuthenga i- I-Galaxy Z Fold 2 ye-1.699 euro kwiwebhusayithi yeSamsung okanye uye eAmazon, apho sinokuyifumana khona ngaphezulu kwama-euro angama-1.200, njengoko ndiphawulile ngasentla.
La Isizukulwana sesithathu seGlass Z Fold 3 Inokwenzeka ukuba ikhutshwe phakathi ku-Agasti, ke ukuba uzimisele ukuthenga i-smartphone esongelayo, ungalinda ezinye iinyanga ezimbalwa ukufumana okungcono kuyo. Nangona ngexabiso le-Galaxy Z Fold 2, ngokobuqu andizukucinga kakhulu ngayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Xiaomi Mi Mix Fold vs Galaxy Z Songa 2
Iimidlalo ezingama-27 eziphambili ze-Android kunye nomlawuli ongenakuphosa